जीवनका सबै समस्याहरूलाई एक क्षणमा हटाउँन मन छ ? वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएका यस्ता छन् उपायहरू ! – साँचो खबर
जीवनका सबै समस्याहरूलाई एक क्षणमा हटाउँन मन छ ? वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएका यस्ता छन् उपायहरू !
वास्तुशास्त्र एउटा यस्तो शास्त्र हो जसले परिवारको सुख समृद्धिको लागि प्रकृतिको उर्जा, स्रोत र पारिवारिक उर्जाको सही र सन्तुलित प्रयोग गर्न सिकाउँछ। जसले सफल जीवन बनाउँछ । यसैले विश्भरीका मानिसहरुले यो शास्त्रलाई अनुशरण गरिरहेका हुन्छन् ।
Previous: नेपालमा रहेको सबैभन्दा महंगो स्कुल, नर्सरी पढ्ने बच्चाका लागि नै बार्षिक ११ लाख ७५ हजार शुल्क
Next: देहताबाट ११० जना सवार जेट बिमान अफगानिस्तानमा दु’र्घटनाग्रस्त